Manao ahoana ny hamoizanao ny tilikambon'ny teknolojia? | Martech Zone
Manao ahoana ny hamoizanao ny tilikambon'ny teknolojia?
Alahady, Septambra 23, 2018 Alahady, Septambra 23, 2018 Lindsay Tjepkema
Inona no mety ho vokany raha nianjera tamin'ny tany ny tilikambonao? Hevitra iray izay nahagaga ahy ny sabotsy vitsivitsy lasa izay, rehefa nilalao Jenga ny zanako raha mbola niasa tamina famelabelarana vaovao momba ny antony tokony hamerenan'ireo mpivarotra ny eritreritr'izy ireo ny antontam-teknikany. Nahagaga ahy fa ny fitobian'ny haitao sy ny tilikambon'i Jenga dia tena manana zavatra itoviana. Jenga, mazava ho azy, dia lalaovina amin'ny fametahana takela-by mandra-pilentika ny zavatra rehetra. Miaraka isaky ny sosona vaovao, mihaosa ny fotony… ary farany nirodana ilay tilikambo. Mampalahelo fa marefo amin'ny fomba mitovy amin'izany ny stacks teknolojia. Rehefa ampiana sosona dia mihaosa ny tilikambo ary mampidi-doza hatrany.
Maninona no mahaliana ny teknolojia bebe kokoa?
Eny, io lahateny nolazaiko tetsy ambony io izay niasako - vao tsy ela aho no faly nanolotra azy tao amin'ny Shop.Org fihaonambe tany Las Vegas. Inoako fa nanakoako tamin'ny mpanatrika izany, satria nifanoherana tanteraka tamin'ny mpitory sy mpivarotra maro hafa ankehitriny. Rehefa dinihina tokoa, ity tontolontsika ity dia tototry ny hafatra momba ny fomba sy ny antony ilantsika teknolojia bebe kokoa. Mazava ho azy fa tsy latsa-danja. Ary ny fomba teknolojia fa tsy isika mpivarotra mamorona sy stratejika no vahaolana amin'ny fitakiana mitombo avy amin'ny orinasantsika sy ny fampitomboana ny zavatra andrasana amin'ny mpanjifa.
Satria tototry ny feon'ny hafatra marobe hatrany isika rehetra izay miantsoantso an'ireo mpivarotra mba hampitombo ny firaketantsika ara-teknolojia, mangataka aminao aho mba haka fotoana fohy ary tena handinika izany ary hihaika izany. Ity hevitra ity fa ny teknolojia arakaraka ny ampidirantsika ao amin'ny stacks, dia vao mainka tsara isika, dia diso. Raha ny marina dia ny mifanohitra amin'izay no tena izy. Arakaraka ny maha isan-karazany ny hodgepodge anao amin'ny fitaovana, rindrambaiko, rindranasa, sy rafitra samihafa, ny tsy fahombiazan'ny vidiny, ny vidiny ary ny risika ampidirinao amin'ny fikambanana.
Ny mpivarotra sasany dia mijery ny tontolon'ny martech ary mitady hampiasa betsaka amin'ireo fitaovana ireo araka ny eritreretin'izy ireo fa afaka na tokony. (Source: Martech Androany)
Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mampiasa teknolojia mihoatra ny antsasaky ny roapolo? Raha ny marina, 63% amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny varotra no milaza fa ny ekipany dia mampiasa teknolojia enina ka hatramin'ny 20 isan-karazany, hoy i Conductor
Source: Mpanatanteraka marketing 500 dia naneho ny paikadin'izy ireo, ny mpitarika ny taona 2018
Misy ny valan'aretina manaparitaka valanaretina toy ny pesta. Ny "Shadow IT" sy ny loza mety hitranga dia tsy azo odian-tsy hita intsony.
Aloka IT sy ireo loza mety hitranga
Misy olana vitsivitsy manaloka ny aloka rehefa misy fampiharana na fitaovana vaovao miseho ao amin'ny fotodrafitrasa orinasa tsy misy idiran'ny sy fitarihana avy amin'ny IT. Ity dia Shadow IT. Fantatrao ve ny teny? Miresaka fotsiny ny teknolojia izay entina miditra amina fikambanana tsy misy idiran'ny IT.
Ny Shadow IT dia afaka mampiditra loza mety hitranga amin'ny fandaminana, ny tsy fitovian'ny fanarahan-dalàna, ny tsy fetezan'ny fampifanarahana sy ny fampidirana ary maro hafa. Ary, raha ny tena izy, ny rindrambaiko rehetra dia mety ho Shadow IT… na dia ny fitaovana sy vahaolana azo antoka indrindra aza. Satria tsy resaka teknolojia ilay izy. Momba ny zava-misy fa tsy fantatry ny IT fa nampidirina tao anaty fikambanana izy io. Ary, noho izany, Tsy mety ho mavitrika na haingana ny mamaly rehefa tafiditra ao anatin'ny fandikana, fanapahana, na olana hafa io teknolojia io - fotsiny satria tsy fantatr'izy ireo fa ao anatin'ny rindrin'ny orinasa io. Tsy afaka manara-maso izay tsy fantany izy ireo.
Ny sasany amin'ireo rindranasa mahazatra indrindra napetraka tsy misy fankatoavan'ny IT dia misy famokarana toa tsy mampidi-doza sy fampiharana fampiharana.
Soso-kevitra Pro: Tsy fitaovana "ratsy" ireo. Raha ny marina, dia azo antoka sy azo antoka izy ireo matetika. Aza adino fa na ny rindrambaiko sy sehatra eken'ny besinimaro aza dia mety ho Shadow IT. Tsy ny teknolojia irery no mipetraka ny olana fa kosa ny tsy fisian'ny fandraisana anjara amin'ny IT. Raha tsy fantatr'izy ireo fa entina ao amin'ny fikambanana ireo teknolojia hafa ireo na teknolojia hafa, dia tsy afaka mitantana na manara-maso azy io izy ireo raha sendra loza mety hitranga. Izay teknolojia vaovao, na kely aza, dia tokony ho eo amin'ny radarakan'ny IT.
Fa andao jerena ny telo amin'ireo antony lehibe napetraky ny Shadow IT sy ny teknolojia lehibe anao sy ny ekipanao amin'ny fahalemena sy ny risika indrindra.
Tsy fahombiazana sy fahaverezana - Teknolojia maro kokoa - na ny fampiharana aza ny famokarana, ny rafitra fifampiresahana ao anaty ary ny vahaolana "point" iraisana - midika izany fa ilaina ny fotoana bebe kokoa hitantanana azy rehetra. Ny teknolojia sy ny fitaovana maro no mamorona mitaky ny mpivarotra mba ho mpitantana fampidirana teknolojia, mpanamora data, na mpitantana rakitra CSV. Manalavitra ny fotoana mety sy tokony holaniana izany fa tsy ny famoronana, singa stratejika amin'ny marketing amin'ny olombelona. Eritrereto izany… sehatra firy no ampiasainao isan'andro hanaovana ny asanao? Adiny firy no laninao amin'ny fiasana amin'ireo fitaovana ireo fa tsy mifanohitra amin'ny paikady mitondra fiara, mamorona votoaty mahasarika, na fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminao? 82% ny matihanina amin'ny varotra sy ny varotra very hatramin'ny adiny iray isan'andro mifanakalo eo anelanelan'ny fitaovam-pivarotana Inona no antontan'isa mampatahotra rehefa heverinao fa mitovy amin'ny 5 ora isan-kerinandro io. 20 ora isam-bolana. Adiny 260 isan-taona. Nandany ny teknolojia fitantanana rehetra.
Vola tsy ampoizina - Ny mpivarotra antonony dia mampiasa fitaovana teknolojia mihoatra ny enina hanaovana ny asany. Ary ny mpampiasa azy ireo dia mampiasa dashboard roa sy dimy hafa ary fitaovana fampandehanana hahafantarana ny fitantaran'ny ekipan'izy ireo. Diniho ny fomba mety hampiakaran'ny vidin'ireto fitaovana ireto (ary mihoatra ny habetsaky ny habetsaky ny habetsahana fotsiny):
Fiverimberenana: Betsaka amin'ireo fitaovana ireo no miverimberina, midika izany fa mandoa fitaovana marobe manao zavatra mitovy isika.
fandaozana: Matetika, mitondra teknolojia amin'ny tanjona manokana isika ary, rehefa mandeha ny fotoana, dia miala amin'izany filàna izany isika… fa mitazona ny haitao ihany, ary manohy ny fakany ny vidiny.
Banga fananganana: Arakaraky ny habetsaky ny endri-javatra natolotry ny lampihazo na ny haitao, ny LESS azo inoana fa hampiasanao azy rehetra. Misy endri-javatra sy fiasa bebe kokoa fotsiny noho ny ekipa mahazatra afaka mianatra, mandray ary mampihatra ny fizotrany. Ka na dia mividy lakolosy sy siotsiôna rehetra aza isika dia mampiasa ampaham-bola kely fotsiny amin'ireo endri-javatra fototra… nefa mbola mandoa ny fonosana rehetra izahay.
Tsiambaratelo / fiarovana ary loza mety hitranga amin'ny fikambanana - Arakaraka ny teknolojia entina miditra anaty fikambanana - indrindra ilay hoe Shadow IT - no mampiditra loza hafa koa miaraka aminy:
Fanafihana cyber. Araka ny filazan'i Gartner, amin'ny taona 2020, ny ampahatelon'ny cyberattacks mahomby amin'ny orinasa dia ho tratra amin'ny alàlan'ny fampiharana Shadow IT.
Famakiana data. Ny fandikana data dia mitentina 3.8 tapitrisa dolara amin'ny orinasa mahazatra.
Ny ekipanao IT dia manana dingana, kaody, rafitra ary rafitra miaro azy mba hanalefaka ireo risika ireo. Saingy tsy afaka ny ho mavitrika na handray andraikitra haingana izy ireo rehefa misy loza mitatao manodidina ny haitao izay tsy fantany fa misy ao anatin'ny fikambanana.
Ka inona no ataontsika?
Mila fiovana ara-tsaina iraisana isika, iray izay manova ny fomba fijerintsika ny fampiharana teknolojia ary mitondra antsika amin'ny fisainana "fanitarana" ka hatramin'ny iray amin'ny "fanamafisana." Fotoana hiverenana amin'ny fotony izao.
Ahoana no ahafahantsika manapaka, aiza no ahafahantsika mampifanaraka ny fihenam-bidy, ary ahoana no ahafahantsika manafoana ireo fitaovana tsy ilaina?
Misy dingana vitsivitsy azonao alaina hanombohana.
Atombohy amin'ny tanjonao - Miverina amin'ny làlan'ny marketing 101. Atsipazo etsy ankilany ny haitao misy anao ary eritrereto fotsiny ny zavatra tokony hataon'ny ekipanao hanampiana ny orinasa hahatratra ny tanjony. Inona ny tanjonao amin'ny marketing? Matetika isika dia manomboka amin'ny haitao ary miverina avy eo mankany amin'ny paikadim-barotra mivarotra mivantana amin'ny teknolojia. Mihemotra io fisainana io. Eritrereto aloha hoe inona ny tanjonao. Ho avy ny teknolojia hanohana ny paikadinao.
Araho ny antontan-taratasinao - Anontanio amin'ny tenanao ireto fanontaniana ireto momba ny stack tech anao sy ny fifandraisan'ny ekipanao miaraka aminy:
Mampihatra tetikady ara-barotra omnichannel ve ianao? Firy ny fitaovana ilaina?
Adiny firy no laninao amin'ny fitantanana ny haitao?
Ohatrinona ny vola laninao amin'ny fakana teknolojia anao manontolo?
Moa ve ny mpikambana ao amin'ny ekipanao mandany ny fotoanany amin'ny fitantanana teknolojia? Sa ve mampiasa fitaovana izy ireo mba ho mpivarotra stratejika kokoa?
Miasa ho anao ve ny teknolojia misy anao sa miasa ho an'ny haitao misy anao?
Mitadiava teknolojia mety amin'ny paikadinao - Rehefa avy nametraka ny tanjonao ianao, nandinika ny stack tech anao, ary ny fifandraisan'ny ekipanao miaraka aminy dia tokony manomboka mandinika izay teknolojia ilainao ianao hitondra ny tetikadinao. Tadidio fa ny teknolojiao dia tokony hampitombo ny ezaka ataonao sy ny ekipanao. Tsy ny mifanohitra amin'izay no izy. Izahay, mazava ho azy, dia manana tolo-kevitra vitsivitsy momba ny fomba hisafidianana ny teknolojia mety aminao, fa tsy hataoko lasa sehatra fivarotana ity lahatsoratra ity. Ny torohevitra tsara indrindra homeko dia izao:
Diniho ny fanamafisana ny stack anao ho faritana vitsivitsy araka izay tratra.
Fantaro ny fomba hanampian'ny teknolojika anao amin'ny tetikady omnichannel.
Anontanio hoe ahoana ny teknolojia hampitambatra ny angon-drakitrao ao anaty tahiry ivon-toerana afovoanao hahafahanao mahazo fomba fijery feno sy miray amin'ny mpanjifa tsirairay avy ary hampiasa amin'ny fomba mandaitra kokoa ny zavatra toy ny AI sy ny fianarana milina.
Mpiara-miasa amin'ny IT - Raha vantany vao azonao ny paikadinao ary fantatrao ihany koa ny teknolojia heverinao fa hanampy anao amin'ny fampiharana azy amin'ny fomba mandaitra, hiara-miasa amin'ny IT handinihana azy ary hampihatra azy. Manorena fifandraisana matanjaka amin'ny IT mba hametrahana dingana mirindra izay hahasoa anao roa. Rehefa miara-miasa amin'ny ekipa ianao dia hahazo ny teknolojia azo antoka sy mandaitra indrindra izay miaro ny orinasanao sy ny mpanjifa koa.
Tsy ny fitaovana teknika sy ny vahaolana no olana. Ny zava-misy fa efa natambantsika ho ao anaty stacks teknolojia Frankensteined izy rehetra. Ny teknolojia no lasa tanjona fa tsy ny fitaovana. IZANY no olana.
Raha ny marina, ireo programa ampiasaintsika (sy izaho) isan'andro dia azo antoka sy tsy mampidi-doza. Mipoitra ny olana rehefa ampiasaina izy ireo ary tsy fantatry ny IT, rehefa manomboka mitantana anao ny masinina fa tsy ny mifanohitra amin'izay, ary amin'ireo tranga ireo rehefa mety hiteraka risika amin'ny fiarovana amin'ny Internet izy ireo.
Farany, ny safidy tsara indrindra dia ny mampifantoka ny zavatra rehetra tena ilaintsika - tokana, sehatra marketing mirindra.
Toy ny skyscraper tsy azo ravana sy maharitra (azo antoka fa tsy tilikambon'i Jenga misy sombin-javatra tsy ampoizina), mazava ny hatsaran'ny sehatra marketing stratejika sy mitambatra ho solon'ny amboaram-baravarana mifangaro miaraka. Fotoana izao handinihana indray an'ity stack tech ity.
Raiso ny PDF mifameno izay amboarinay momba ny Shadow IT, ary omena anao ny fitadiavana vahaolana azo esorina mba hamongorana ireo olana ireo! Mifandraisa amiko ary ampahafantaro ahy ny olana efa hitanao na niainanao tamin'ny teknolojia be loatra, na raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanamafisana ny ezaka varotra nomerika rehetra amin'ny sehatra iray natao ho an'ny mpivarotra.
Sintomy inona avy ireo loza ateraky ny teknolojia?
Tags: mpitarikaEmarsysittontolon'ny teknolojia marketingMartechstack martechmetysecurityaloka izanytilikambon'ny teknolojiafifidianan'ny mpivarotra
Lindsay Tjepkema no CEO sy mpiara-manorina ny Casted, sehatra marketing tokana sady tokana natsangana manodidina ireo podcast marika. Manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny varotra B2B, ao anatin'izany ny fampandehanana ny masoivohon'ny mpanolo-tsaina azy, izy dia mpitarika mavitrika izay nanana fahombiazana lehibe tamin'ny fananganana ekipa marketing teo an-toerana sy manerantany. Rehefa avy nandefa podcast marika ho an'ny orinasa marketing manerantany, Lindsay dia nahatsapa ny fitiavany ny resaka marina. Izany dia nitarika azy hanorina Casted mba hanampiana ireo mpivarotra hamaha ny fahafahan'ny atiny feno amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny podcasting. Ny orinasa dia nahazo fidirana haingana teo amin'ireo marika izay maniry ny hamorona fifandraisana bebe kokoa amin'ireo mpihaino azy amin'ny alàlan'ny resaka marina.
Productsup: Syndication sy atiny fitantanana sakafo